Masuuliyiin Heer Gobol ah Oo Booqday Biyo Xidheenka Ceeblacad. - Cakaara News
Masuuliyiin Heer Gobol ah Oo Booqday Biyo Xidheenka Ceeblacad.
Sagag(CN), Arbaca, 27, January, 2016, Qaarka mid ah masuuliyiinta Gobolka Nogob oo maal-mahan kor-meer shaqo ku marayay mashaariicaha horumarineed ee laga hirgalinayo qaarka mid ah, degmooyinka Gobolka Nogob ayaa maanta booqday mashruuca biyo xidheenka laga wado tuulada ceeblacad ee degmada Sagag.
Masuuliyiintan oo uu horkacayay hogaanka nabadgalyada Gobolka Nogob mudane Guuleed Maxamed Ismaciil ayaa waxaa ku wehelinayay masuuliyiinta maamulka degmada Sagag iyo injineero heer deegaan ah. Waxayna ku soo kor meereen qaybaha biyo xidheenkan iyo nidaamka ay u socoto shaqadiisu.
Masuuliyiintaasi oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in mashruucani yahay mid hadda shaqadiisu meel fiican marayo islamarkaana ay sidii loogu talagalay hawlihiisa shaqo ee lagu hirgalinayo biyo xidheenkani u socdaan.
Qaarka mid ah masuuliyiinta degmada Sagag ayaa sheegay in ay muda kooban lagu soo afmeeridoona dhamaanba mashaariicaha horumarineed ee degmada ka socday sanad miisaaniyeedkan 2008TI,kuwaasi oo uu ka mid yahay mashruucan biyo xidheenka degmada sagag ee laga hirgalinayo tuulada ceeblacad.